के तपाईं भ्यागुतो बारेमा सबै थाहा लाग्छ? यो राम्रो तरिकाले यो यति छैन भनेर हुन सक्छ। त्यसैले, तपाईं यो लेख पढ्न र यी प्राणीहरू बारेमा नयाँ र रोचक कुराहरू धेरै सिक्नुपर्छ। तिनीहरूले अचम्मको जनावर साँच्चै किनकी, भ्यागुतो बारेमा नयाँ जानकारी सिक्न हरेक मौका प्रयोग गर्नुहोस्। अविश्वसनीय कूदता सुरु हुने र चरम अवस्थामा अद्भुत अस्तित्व प्रविधी संग खत्म, को भ्यागुतो तपाईं विस्मित गर्न बन्द छैन। र यहाँ तपाईं निश्चित स्कूल जीव पाठ मा भन्नुभयो हुनेछ जो यी प्राणीहरू, लगभग दस रोचक तथ्य छन्। यी अद्भुत र कहिलेकाहीं भन्दा बढी अनपेक्षित विवरण तपाईं साँच्चै यति सरल र साधारण देखिन्थ्यो के थाहा कति सोच्न बनाउन।
तिनीहरूलाई chasing गर्दा भ्यागुतो crickets धेरै उच्च हाम फाल्न सक्छ
यी भ्यागुतो एक दूरी आफ्नो शरीर को 60 भन्दा लम्बाईहरू जोखिम संग हाम फाल्न सक्छ। निस्सन्देह, राशि बारेमा मात्र एक मीटर द्वारा प्राप्त, तर यदि यो एक व्यक्ति आदर गणना गरिन्छ, त तपाईं पनि यस्तै परिणाम हासिल गर्न, 38-मंजिल्ला भवन को एक उचाइ गर्न सरल हुनेछ। यसरी, हेर्नुहोस् को एक मानव बिन्दुबाट, एक मीटर - छैन प्रभावशाली परिणाम हो, तर दृश्य को भ्यागुतो बिन्दु यो उचाइ हेर्दा, यो बस अचम्मको छ।
यसको नाम भ्यागुता-टमाटर अप
भ्यागुता-टमाटर किनभने यसको रातो रंग को एक टमाटर जस्तै देखिन्छ कि पूर्ण बल बनेर, सुनिनु गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यस पल मा त्यो धम्की छ भने, त्यो छाला मार्फत विष स्राव गर्न थाल्छ। यो सिकारीहरूबाट नै रक्षा गर्न छाला मार्फत विष स्राव गर्न सक्ने मात्र भ्यागुतो छैन। धेरै उप Mantella पनि भ्यागुतो-डार्ट भ्यागुतो जस्तै, toxins, उत्पादन।
आफ्नो नातेदार खान भनेर समय समयमा भ्यागुतो तथ्यलाई लागि प्रसिद्ध Burrowing गर्न
र वैवाहिक सम्बन्ध कुनै फरक बनाउन छैन। भ्यागुतो burrowing पनि आफ्नै सन्तान खाए जब पटक त्यहाँ थिए। प्रकृति, यो दृष्टिकोण एकदम दुर्लभ हो, त्यसैले burrowing भ्यागुतो धेरै बाहिर सामान्यतया brood को धेरै प्रकारको हेरविचार छन् जो भ्यागुतो, बाँकी देखि, विशेष गरी सर्कल एक जवान भ्यागुतो खान इन्कार नगर्नुहोस् खतराबाट र शिकारीहरु को पूर्ण छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको खडा।
Burrowing भ्यागुतो पनि भूमिगत burrows मा dug र त्यहाँ धेरै महिना खर्च गर्न सकिन्छ
तिनीहरूले आफ्नो नाम पायो किन हो। यो विधि तिनीहरूलाई अत्यन्तै शुष्क मौसम, तापमान नाघ्यो जब 40 डिग्री सेल्सियस दिन को समयमा र राति खस्छ अत्यन्तै कम स्तर को अवधि समयमा आफूलाई सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। यस वर्षाको सिजन सुरु गर्दा, यी भ्यागुतो सतह आउन र shallows पठाइयो।
हरियो र कालो डार्ट भ्यागुतो, एक टोली रूपमा काम गर्दै छोराछोरी हुर्काउन
महिलाहरुको खसेको पात को 13 अन्डा को एक सानो मुट्ठी राख्नु, र त्यसपछि तिनीहरूले जब अन्डा, सानो भ्यागुतो देखापर्ने रूखहरू बीचमा एउटा सानो पानी स्रोतहरु आफ्नो पछाडि तिनीहरूलाई बोक्न त हो जो पुरुषहरु, हेरविचार।
दक्षिणी चितुवा भ्यागुतो पर्याप्त ध्वनि छैन: यो धेरै दुई रूपमा छ
यी ध्वनि को एक, दोस्रो एक staccato हाँस लागि गलत हुन सक्छ, जबकि एक व्यक्ति एक बेलुन मा एक औंला धारण गर्दा प्राप्त छ जो creaking, को reminiscent छ।
वन भ्यागुतो भयानक चिसो छैन
को भ्यागुतो को भ्यागुतो नै हानि कारण बिना स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ को शरीर मा निहित तरल को एक तेस्रो सम्म। यो सुविधा वन भ्यागुतो धन्यवाद सुरक्षित रूपमा माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस रूपमा कम तापमान बच्न सक्नुहुन्छ। एक मानिस को लागि, यो तापमान हाम फाल्न पनि भ्यागुतो को मामला मा रूपमा उचाइ crickets, कुनै स्वेटर वा जैकेट छ जो भ्यागुतो, को दृश्य को बिन्दुबाट स्थिति मा एक नजर लिएर लायक पनि भयानक जस्तो हुन सक्छ, तर। सबैभन्दा भ्यागुतो उप-शून्य तापमान मा बाँच्न गर्न सक्षम छन्, त्यसैले वन भ्यागुतो बाहिर खडा।
काठ भ्यागुतो धेरै prolific को प्रतिष्ठा छ
तपाईं भ्यागुतो हजारौं भरिएको घण्टा एक तालाब चयन प्रजनन जमीन जोडी, कसरी देख्न सक्छौं। किनकी यो केहि छैन तर, यदि यो तपाईंको मनपर्ने तालाब छ चिन्ता नगर्नुहोस् - बिहान द्वारा सबै भ्यागुतो उहाँलाई छोड्न हुनेछ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रजाति को प्रजनन अवधि तपाईं हप्ता भर, उहाँले सामान्यतया सँगसँगै छ जो को croaking सुन्न छैन त, धेरै छोटो छ। एक रात वन भ्यागुतो सामान्यतया पर्याप्त भन्दा बढी।
उत्तरी अमेरिका मा भ्यागुतो Burrowing धेरै ठूलो
यी महाद्वीप मा सबै भन्दा ठूलो भ्यागुतो छन्। तिनीहरूले कल अप किलोमिटर गर्न एक दूरी मा सुने गर्न सकिन्छ भनेर ठूलो हो, र यो तर विस्मित गर्न सक्दैन।
सबै भ्यागुतो webbed औंलाहरु
उदाहरणका लागि, Mantella - यो स्थलीय भ्यागुतो को धेरै प्रजातिहरु पौडी लागि webbed छैन भन्ने एक किनभने तिनीहरूले बस आवश्यक छैन छ। तिनीहरूले सम्पूर्ण जीवन भूमि मा, पानी अन्तर्गत पौडी खेल्न छैन, amphibians प्रकार जस्तै तिनीहरूले राम्रो भ्यागुतो को मात्र webbed पंजे पंजे हेर्न accustomed ती अनौठो लाग्न सक्छ औंलाहरु यति खर्च।
स्थानहरू वासस्थानमा टिकटिक। टिकटिक-सार्ने Encephalitis: वासस्थानमा
परिवार Cucurbitaceae। परिवार Cucurbitaceae पुरातन सदस्य
इन्टरनेटमा विन्डोज7स्वचालित जडान कसरी कन्फिगर गर्न?
भंग लागि पहिलो सहायता: व्यावहारिक सल्लाह
एकल-breasted ज्याकेट - ठोस मानिसहरू लागि वस्त्र